Tutortoo | Franmụaka Franchises | Franchiseek
»Ohere ndi Franchise»Tutortoo Franchise
Azụmaahịa na-enyere nwa ọ bụla ezigbo
Otu n'ime ihe ndị kachasị akwụghachi ụgwọ obere ohere ị nweta ego ụlọ nke dị na UK.
Anyi bu obere ohere oru ndi ohuru nwere mmuta ohuru na ngalaba akwukwo. Anyị na-enye ihe karịrị ụlọ ọrụ azụmaahịa ọ bụla nke gbakwunyere ebe ahụ na-achịkwa ma ọ bụ n'ụzọ ọzọ. Anyị ga-enyere gị aka ịnapụta ndị nkuzi ihe ọmụmụ, ụlọ akwụkwọ, nkuzi na klọb nke na-ekpuchi isiokwu niile na ị na-enye ọrụ na-enweghị ọrụ maka obodo gị. Site na Tutortoo, ị na-erite uru site n'ọchịchọ afọ na ọtụtụ elele na - enweta ego na - eweta ego nwere ike ịjikọ yana njiri ndụ ọrụ.
Ọnụ ego mbụ nke onye Tutortoo bụ £ 15,000 ma ọ bụrụ na inwere ego site n'aka HSBC ma ọ bụ NatWest onye ga-enye gị £ 25,000 na nchekwa echekwara. Then ga - enwe ihe 40,000 dị mkpa iji zụta franchise ma mee ka azụmahịa ahụ mebie - ọbụlagodi nke ga - eme gburugburu ọnwa 11. Yabụ, ị tinyere £ 15,000 wee wepụta £ 24,000 na afọ mbụ gị! Anyị na-eche na ọ ga-abụ ahịa kacha mma bidoro ịmalite ahịa na UK taa.
Tutortoo Franchise Enwee Ike
Dịka Tutortoo franchisee, ị ga-enwe ohere irite ihe karịrị £ 100,000 kwa afọ site na afọ 3 gaa n'ihu. Na mbu anyị na-atụ aro ịkwụ ụgwọ ụlọ nke $ 2000 kwa ọnwa iji belata mmefu belata ma jikwaa njikwa ego. Mgbe azụmaahịa gị tozuru ogo, afọ 3 gaa n'ihu, uru ahịa dịkwa nke gị. Anyị na-atụ anya ka azụmahịa bụrụ ihe ruru $ 500,000 na njedebe nke afọ 5, yabụ ị na-ewulite ego maka ego mgbe ị kpebiri ịhapụ azụmahịa ahụ (ọ bụrụ na ị na-eme).
Kedu ka anyị si atụnyere?
Tutortoo bụ naanị franchise ma ọ bụ azụmaahịa nke na-enye otu nkuzi n’ụlọ n’ụlọ maka ihe ọmụmụ niile na Mkpa Agụmakwụkwọ Pụrụ Iche. Onyinye anyi ji abughi ihe puru iche dika ikike inweta ihe anyi nwere. Anyị ji naanị ụgwọ ọrụ nlekọta ọrụ (MSF) n'aka gị, wepụtara gị were nke ọdụm. Anyị anaghị ana ego n'aka ndị na-ebunye anyị ego ma ọlị, nke pụtara na ị na-erite uru n'ezie site na ike ịzụ otu. Anyị nwere mmetụta na-eduzi ụkpụrụ omume gị na-eduga gị n'ọdịnihu dị mma.
Anyị azụmaahịa a ọma ọma ahịa ugbu a, ọ fọrọ nke nta ka afọ 3 na anyị ehibere ihe ịga nke ọma na nke na-arụ ọrụ nlereanya. Anyị na-enye akwụkwọ ngosi zuru ezu ma nye gị ohere ịnweta ozi na sistemụ niile anyị. Akụkụ kacha mma bụ na mkpesa anyị na-ekwu maka ihe ndị anyị na-akpata na-atumatu na ụzọ n’ụzọ atọ nke usoro uto anyị nwetara.